Wụgharịa gacha ọhụrụ maka gam akporo akpọrọ Dragon Quest Tact | Gam akporosis
Square Enix na-ebupụta gacha si na akụkọ ifo na Dragọn Quest Tact
Porridge, na ndị ọzọ porridge ị kpọghee ekwt ihe odide ohuru ma wetara ha ndi otu anyi na dragon Quest Tact, aha ohuru nke Square Enix nke aha ama ama nke anyi nwere Akira Toriyama dika onye na-ese ihe osise (ee, onye okike nke Dragon Ball ma ọ bụ Dragonball).
con ihe niile aha a pụtara, anyị nwere egwuregwu a na-egwu nke ọma na aka anyị nke ọgụ na-akpaghị aka na nke anyị na-ebugharị ihe ngosi site na itinye nkeji anyị tupu ịmalite ọgụ ahụ. N'ebe a, ọ dabara na ụdị egwuregwu egwuregwu chessboard ebe nkeji na-agagharị onwe ha ịwakpo na ịgbachitere. Gaa maka ya.
1 Ka ọ bụrụ Dragọn Quest na-adọta uche
2 Debe nkeji nke ọma na Dragọn Quest Tact
3 Talent nke Toriyama
Ka ọ bụrụ Dragọn Quest na-adọta uche
Nke bu eziokwu nwee eluigwe na ala nke Akira Torimaya kereMa ọ dịkarịa ala site n'aka ya, ọ pụtara ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ egwuregwu RPG nke nwere njirimara nke ya site na oge mbụ anyị pịa mkpịsị aka anyị na ya iji nwee egwuregwu dị jụụ.
Nwere ọtụtụ porridge ya na nke akpọghe ndị enyi ọhụrụ ma ọ bụ ndị dike na anyị nwere ike itinye ha na ndị otu anyị. Dị ka anyị kwuburu na mbụ, anyị ga-edobe ndị otu tupu ha agbazinye onwe ha iji lụ ọgụ megide ndị iro dị iche iche.
Ka anyị n'aga n'ihu, opekata mpe n'ọkwa nke ọ bụla, anyị na-enweta onye ọhụụ ọhụụ iji chọpụta ma ọ bara uru itinye ya na otu. N'ezie, anyị ga-emezi ka otu ahụ jiri kaadị ọhụrụ anyị ga-emeghe.
Debe nkeji nke ọma na Dragọn Quest Tact
Dị ka aha ya na-egosi na "akọ", nke a Dragon Quest nwere ọtụtụ atụmatụ ịnwe nkeji; dị ka na-eme na nnukwu Ike & Ime Anwansi: Chess Royale. N'aka ozo, obughi na ibido ma bido na otu anyi gha eche onye iro agha, kama anyi aghaghi idobe nkeji ya ka ha wepu onwe ha, rite uru ha ma obu dozie adighi ike ha mgbe anyi tinyere ha n'azu.
Anyị nwere modo mgbasa ozi ebe anyị na-aga n'etiti ọkwa dị iche iche na isi iji mara akụkọ ihe mere eme nke, ee, dị n'asụsụ Bekee. Ọ bụghị n'asụsụ Spanish n'oge ahụ, ọ bụ ezie na ihe niile ga-abụ obere ndidi, ebe ọ bụ na egwuregwu ahụ dị na Japanese, n'ihi ya, anyị nwere ike ịchọta egwu na ezé anyị na ọ dị.
na ọgụ ọgụ na-aga site n'ámá na ntụgharị, nke ahụ bụ, ọ bụghị na ezigbo oge ka ọ na-eme na egwuregwu Ubisoft nke anyị na-ahụ nkeji niile na-awakpo ma na-agbachitere.
Talent nke Toriyama
Na eziokwu bụ na egwuregwu dị ka Dragọn Quest Tact -egosi anyị na-enwe dị ka a isi ụfọdụ odide ndị The Epic n'ihi eserese ya na nhazi ya, na ahụmịhe ahụ n'ọtụtụ egwuregwu, na-achọghị ma ọ bụ na-a drinkingụ ya, na-eduga anyị ka anyị kpọọ otu egwuregwu ọzọ; na-ama maara na anyị na-eche ihu a gacha.
Anya na zuru oke na-arụ ọrụ iji wetara anyị nnukwu Dragọn Nchọgharị na ihe odide ndị ahụ, gburugburu na akụkọ. Ndị nnukwu anụ na ndị enyi ụdị dị iche iche bụ omume ọma ya maka egwuregwu gbara gburugburu yana na ị nwere freemium na n'efu.
Dragon Quest Tact bụ nnukwu ihe ọhụụ iji kwụsị ọnwa na na anyị nwere ike ikwu na ị ga-enwe n'aka gị na nnukwu anụ kere Akira Toriyama onwe ya, a akụkọ mgbe dị ka Dragọn Quest saga.
A gacha nke na-ahụ n'anya maka ịbụ Dragọn Quest na ịnwe aka nke Toriyama na-emepụta ihe odide ya niile na nnukwu anụ.
Ọ na-ahapụ onwe ya ka a gwuo maka ịbụ Dragọn Quest nke na-amalite na ọkọ na mmepe
Ihe odide na nhazi ha n'ogo n'ozuzu
Mmetụta anya nke ọgụ ndị ahụ abụghị na ha bụ ndị kachasị asụ asụsụ anyị hụrụla
Dragọn ahụ na-ajụ ajụjụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Square Enix na-ebupụta gacha si na akụkọ ifo na Dragọn Quest Tact
OnePlus 9 Lite: Gini ka anyi nwere ike icho anya na ekwentị ozo?
Otu esi ejikọ taabụ na 'grid view' na Chrome: nnukwu ihe ọhụụ nke ihe nchọgharị ahụ